トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Macluumaadka la soo ururiyay iyadoo la isticmaalayo magazine pachinko
Si aad idinka mid ah oo pachinko ah, waxaan u maleynayaa in dadka qaar ka mid ah, kaas oo ay tahay in la akhriyey magazine pachinko ah. Sanadihii la soo dhaafay, ma aha oo kaliya majaladda bixisay, warqad bilaash ah, iwm lala dhacdo ayaa sidoo kale u soo baxday badan. warqad Free, maxaa yeelay, waa Nowak for free oo taga si qowladda pachinko ah, waa faa'iido ka yar biil magazine. Magazine of pachinko macluumaadka waxaa ka buuxa ayaa ka soo baxay tiro badan, laakiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin.
oo ka mid ah iyaga qallafsan, qabsadaan macluumaad waxyaalaha iyo macluumaad model iyo qaabeeyaan macluumaad godka qowladda pachinko waxay noqotay maamulaha a waxaa jira wax in uu noqday mawduuc. First of dhan, in majaladda in macluumaadka model ah ayaa noqday arrin, ixtimaalka hit weyn iyo wax soo saarka ee Xintai, ayaa sidoo kale isku halaynta, sida macluumaad kala duwan ee saamaynta waxaa la daabacay.
Iskusoo wada duuboo, in ay dhacdo pachinko waa ugu in xawaaraha wareeg ah oo kun oo yen ayaa posted. Gudbiyay sida line soohdinta, laakiin line soohdintu waxay tahay, maxaa yeelay qiimaha tirsi waa in la soo saaray si loo xisaabiyo qiimaha tiro kala duwan sida itimaalka hit iyo jaaniska itimaalka kala duwanaansho weyn, xisaabinta waa culays.
In qowladda pachinko meesha aad tagi kartaa, laakiin waxaan qabaa in ratio diinta kasta waa ka duwan yahay, xitaa line xadka kala duwanaan doonaa heerka lacagta. Waa in majaladda, sidoo kale waxaa jira meel uu soo saaray heerka furasho si gooni gooni ah ka line soohdinta, waxa uu noqday mid aad u sahlan. In the case of
boqolkiiba mishiinka Afyare waxa ay noqon doontaa wax la mid ah. In the case of pachinko waa sixitaanka dhidib ah, iwm, waxaa jira xogta jirin sida mashiinka loo xilsaaray kala mishiinka kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, in Afyare, tan iyo tirada galinta mid wareeg ah waa go'an yahay, waxaan kala Mashiinka waxaa la dhigay baxay.
waa ka wanaagsan dabcan ku dhow inay 100%, waxa ay noqon doontaa faa'iido. Agaasimaha
ee isku halaynta dabcan, marka aad dhab ahaantii ku dhacay waa, og yahay macluumaadka ka hor aad rabto in aad, laakiin maxaa yeelay, waxaa muhiim ah in ay ku dhaceen ogaan mishiino ee line soohdinta waa kan ugu fiican, macluumaadkan waxaa ka wanaagsan in pachinko tago maanka waxaan qabaa.
ka dibna, waa dhacdooyin magazine xirfadeed iyo warbixin Xintai qowladda pachinko uu noqday maamulaha a. Noocan ah magazine macluumaadka ii tahay in aan, xitaa iyo kooxda martida pachinko ii bixinta lacagta. Maxaa yeelay, waxay sidoo kale ku koobnayn tirada dhacdooyinka posted in, aad ii yimaadaan, waayo dhacdo ama kaliya in ay soo jiitaan macaamiisha aad rabto in aad dhacdooyinka in la darso in dadaalka. Dhacdooyinka xaqiiqda
in uu yahay ayaa posted on magazine ah ee noocan oo kale ah waa xaqiiqada ah in ay dhacdo waa qiimo gaarno. Near qowladda pachinko aad ka mid ah, haddii aad iga tahay, isku day inaad si ay u tagaan dooneysa dhacdooyinka in ku qoran yihiin.
badan dhacdooyinka in sida caadiga ah waxaa la geliyaa on page guriga, waxaan u malaynayaa in rating waa haddii ay dhacdo ee kor ku xusan. Sidaas magazine macluumaadkan, aad hayso macluumaad kala duwan in uu noqdo mawduuca of majaladda. Haddii macluumaadka model cidda, hubi inaad line soohdinta, in macluumaadka qowladda pachinko waa majaladaha maado, isku day inaad si loo hubiyo in si loo hubiyo dhacdo.
ka dhibic kala duwan ee aragtida, waxaa laga yaabaa wanaagsan iyo isku day badan oo macluumaad ururinta.